ओलीसंग भिडेका डा.भीम रावल गृहजिल्लामै लागे ठेगान ! | Dainik News Nepal
ओलीसंग भिडेका डा.भीम रावल गृहजिल्लामै लागे ठेगान !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिमका ८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरि सक्दा एमालेमा ओली पक्ष कै वर्चश्व कायम गरेका छन् भने माधव नेपाल संगै ओलीका विरुद्ध पार्टी भित्र संघर्ष गरेका भीम रावल पक्षको भने निरिह भएका छन् ।
गत पुस २३ गते एकैसाथ अधिवेशन शुरु भएका ८ जिल्लामा सर्वसम्मत र निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नयाँ नेतृत्व चुनिंदा संस्थापन पक्षको वर्चश्व छ । एकता प्रक्रियाबाट आएका र १० बुँदे पक्षधरहरु भने निरिह अवस्थामा देखिएका छन् ।
कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र दार्चुलामा निर्वाचन प्रक्रियाबाट तथा डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र बाजुरामा सर्वसम्मत रुपले नेतृत्व चयन भएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये बझाङमा भने अधिवेशन हुन बाँकी छ ।सबैभन्दा बढी संगठित सदस्य रहेको कैलालीमा संस्थापन पक्षका रतन थापा र रणबहादुर चन्दले प्यानल बनाएर चुनाव लडेका थिए ।
अध्यक्षमा चन्दलाई ४ मतले पराजीत गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका थापा विजयी भए । उपाध्यक्षमा संस्थापन पक्षकै दुर्गा जोशी विजयी भएका छन् ।
कञ्चनपुरमा एकता प्रक्रियाबाट आएका निवर्तमान अध्यक्ष बिरबहादुर थापा र निवर्तमान सचिव सुरेन्द्र विष्ट प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । त्यहाँ थापालाई पराजित गर्दै विष्ट प्यानलसहित विजयी भएका छन् ।
विष्ट भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर समेत हुन् । उपाध्यक्षमा विष्ट प्यानलका लक्ष्मी बुढा, सचिवमा पल्लबराज भट्ट, उपसचिवमा कर्णबहादुर चन्द र फैरु तामाङ विजयी भएका छन् ।
एमाले दार्चुलाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पनि निर्वाचन भएको थियो । दार्चुलामा १० बुँदे पक्षधरका ज्ञानेन्द्र घर्तीलाई फराकिलो मत अन्तरले पराजित गर्दै संस्थापन पक्षका प्रेमसिंह धामी विजयी भएका छन् ।
उपाध्यक्षमा संस्थापन पक्षका चरन बुुढाथोकी, सचिवमा शेरसिंह धामी, उपसचिवमा खडक बडाल र एकता प्रक्रियाबाट आएकी चन्द्रादेवी कुुँवर विजयी भए ।
बैतडीमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरिए पनि उम्मेदवारहरुलाई मनोनयन फिर्ता गर्न लगाएर सर्वसम्मत रुपमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । यहाँ अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका गोरखबहादुर चन्दले मनोनयन फिर्ता लिएपछि निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सुरेन्द्र पाल अध्यक्ष बने ।
उपाध्यक्षमा एकता प्रक्रियाबाट आएका रमील बम र सचिवमा दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका चक्र कार्की सर्वसम्मत भए । उपसचिवमा सहमतिका आधारमा मनोनित गर्ने तयारी छ ।
डडेल्धुरामा भने संस्थापन पक्षका प्रकाशबहादुर साउँद सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा एकता प्रक्रियाबाट आएका धनबहादुर धामी ९विवेक०, सचिवमा संस्थापन पक्षका गजेन्द्र शाही, उपसचिवमा मीन बोगटी र अन्जु गैरे चयन भए ।
डडेल्धुरामा पदाधिकारीमा १० बुँदे पक्षधर अटाउन नसकेको पाइएको छ ।बाजुरा अध्यक्षमा भने निवर्तमान अध्यक्ष कालीबहादुर शाही दोहोरिएका छन् । संस्थापन पक्षकै शाही सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका हुन् । उनी जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि हुन् ।
उपाध्यक्षमा भरत बुढा, सचिवमा भरत थापा, उपसचिवमा जनक बोहोरा र हरि रोकाया चयन भएका छन् ।एमालेले डोटीमा पनि सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अध्यक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका चक्र मल्ल पुनः सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
उनी १० बुँदे पक्षधर मानिन्छन् । उपाध्यक्षमा १० बुँदे पक्षधर मन्जु मलासी, सचिवमा संस्थापन पक्षका शेर बहादुर मल्ल सर्वसम्मत भएका छन् ।९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा बझाङमा हिमपातका कारण अधिवेशन गर्न नसकिएको एमालेले जनाएको छ ।
केपी शर्मा ओलीडा.भीम रावल